Iindaba-Imiyalelo yoSetyenziso oluKhuselekileyo lwe-Chain Lashings
Imiyalelo yoSetyenziso oluKhuselekileyo lwe-Chain Lashings
Olu lwazi luloluhlobo oluqhelekileyo kuphela lugubungela iingongoma eziphambili zokusetyenziswa ngokukhuselekileyo kwe-Chain Lashings.Kusenokuba yimfuneko ukongeza olu lwazi kwizicelo ezithile.Jonga isikhokelo ngokubanzi malunga nothintelo lomthwalo, olunikwe ngaphaya.
Hlola imivimbo yekhonkco phambi kokuba uyisebenzise.
● Bala amandla okubethekisa afunekayo kwindlela ekhethiweyo yothintelo lomthwalo.
● Khetha umthamo kunye nenani leelayishi zamatsheyini ukunika ubuncinci amandla okubaliweyo okuqhekeza (s)
● Qinisekisa ukuba iindawo zokuqhwala kwisithuthi kunye/okanye umthwalo zomelele ngokwaneleyo.
● Khusela i-chain lashing kwimida encinci ye-radii okanye unciphise umthamo wokuqhawula ngokuhambelana nemiyalelo yomenzi.
● Qinisekisa ukuba imivimbo yetsheyini icinezelwe ngokuchanekileyo.
● Ziqhelise ngononophelo xa ukhulula imivimbo yetyathanga xa umthwalo uzinzile ukususela oko kwafakwa imivimbo.
● Sebenzisa iintambo zamatsheyini ukuphakamisa umthwalo.
● Iqhina, qhina okanye ulungise imivimbo yetyathanga.
● Imivimbo yetyathanga eligqithileyo.
● Sebenzisa i-chain lashings kwi-edge ebukhali ngaphandle kokukhusela okanye ukunciphisa umthamo wokuqhawula.
● Veza imivimbo yeekhemikhali ngaphandle kokudibana nomthengisi.
● Sebenzisa imivimbo yetsheyini enawo nawaphi na amakhonkco amatsheyini agqwethekileyo, i-tensioner eyonakeleyo, izifakelo zetheminali ezonakeleyo okanye ithegi ye-ID engekhoyo.
Ukukhetha iChayini echanekileyo yokuLashing
Umgangatho we-chain lashings yi-BS EN 12195-3: 2001. Ifuna ukuba ikhonkco ihambelane ne-EN 818-2 kunye nezixhobo zokudibanisa ukuze zihambelane ne-EN 1677-1, 2 okanye 4 ngokufanelekileyo.Amacandelo okuqhagamshela kunye nokunciphisa kufuneka abe nesixhobo sokukhusela esifana ne-latch yokhuseleko.
Le migangatho yenzelwe izinto zeBakala 8.Abanye abavelisi bakwabonelela ngamabakala aphezulu athi, ubungakanani ngokobungakanani, abe nomthamo omkhulu wokuqhawuka.
I-chain lashings ifumaneka kuluhlu lwezakhono kunye nobude kunye nokucwangciswa okuhlukeneyo.Ezinye zinjongo jikelele.Ezinye zenzelwe usetyenziso oluthile.
Ukukhethwa kufuneka kuqale ngovavanyo lwemikhosi esebenza kumthwalo.I-lashing force (s) efunekayo kufuneka ibalwe ngokuhambelana ne-BS EN 12195-1: 2010.
Emva koko khangela ukuba iindawo zokubethelwa kwisithuthi kunye / okanye umthwalo zinamandla aneleyo.Ukuba kukho imfuneko faka inani elikhulu lemivumbo ukuze usasaze amandla kwiindawo ezininzi zokubethelwa.
Iintambo zekhonkco ziphawulwe ngekhono labo lokuqhawula (LC).ebonakaliswa nge-daN (deca Newton = 10 Newtons) La mandla angamandla aphantse alingane nobunzima be-1kg.
Ukusebenzisa iChain Lashings ngokuKhuselekileyo
Qinisekisa ukuba i-tensioner ikhululekile ukulungelelaniswa kwaye ayigobeki phezu komphetho.Qinisekisa ukuba ikhonkco alijijwanga okanye aliqhinwanga kwaye izifakelo zetheminali zisebenzisana ngokuchanekileyo neendawo zokuleqa.
Kwimivimbo emibini, qinisekisa ukuba iindawo ziyahambelana.
Qinisekisa ukuba ikhonkco likhuselwe kwimiphetho ebukhali kunye nencinci yerediyasi ngokupakisha okufanelekileyo okanye abakhuseli becala.
Qaphela: Imiyalelo yomenzi inokuvumela ukusetyenziswa kwincam yeradiyasi encinci ngaphandle kokuba umthamo wokubethisa ucuthiwe.
Ukuhlolwa komsebenzi kunye noGcino
Imivimbo yekhonkco ingonakala ngokucinezela ikhonkco kwincam yeradiyasi encinci ngaphandle kokhuselo olwaneleyo lomphetho.Nangona kunjalo umonakalo unokwenzeka ngengozi ngenxa yomthwalo ohambayo kuhambo kungoko kukho imfuneko yokuhlola phambi kosetyenziso ngalunye.
Imivimbo yekhonkco akufuneki ibe sesichengeni kwiikhemikhali, ngakumbi iiasidi ezinokuthi zibangele i-hydrogen embrittlement.Ukuba ukungcoliseka ngengozi kwenzeka, imivimbo kufuneka icocwe ngamanzi acacileyo kwaye ivumeleke yome ngokwemvelo.Izisombululo zeekhemikhali ezibuthathaka ziya kuba namandla ngakumbi ngokunyuka komphunga.
I-chain lashings kufuneka ihlolwe iimpawu ezicacileyo zomonakalo phambi kokusetyenziswa ngalunye.Musa ukusebenzisa i-chain lashing ukuba kukho naziphi na iziphene ezilandelayo ezifunyenweyo: amanqaku angafundekiyo;amakhonkco amakhonkco agobileyo, amade okanye anotshiswe, agqwethiweyo okanye aphawulweyo okudityaniswa kwamalungu okanye izifakelo eziphelayo, ezingasebenziyo okanye ezingekhoyo iiletshi zokhuseleko.
I-chain lashings iya kunxiba ngokuthe ngcembe ngokuhamba kwexesha.I-LEEA icebisa ukuba kufuneka zihlolwe ngumntu onobuchule ubuncinane rhoqo kwiinyanga ezi-6 kunye nerekhodi eyenziwe ngesiphumo.
Imivimbo yekhonkco kufuneka ilungiswe kuphela ngumntu onobuchule bokwenza oko.
Ukugcina ixesha elide indawo yokugcina kufuneka yomile, icoceke kwaye ingabi nazintsholongwane.
Ulwazi oluthe kratya lunikwe apha:
I-TS EN 12195-1 Uthintelo lomthwalo kwizithuthi ezindleleni-Ukhuseleko-Icandelo 1: Ukubalwa komkhosi wokhuseleko
I-TS EN 12195-3 Uthintelo lomthwalo kwizithuthi ezindleleni-Ukhuseleko-Icandelo 3: Amatyathanga okuLashing
Izikhokelo zokuSebenza eziGqwesileyo zaseYurophu kuKhuseleko lweMpahla kuThutho lweNdlela
Ikhowudi yokusebenza yeSebe lezoThutho - uKhuseleko lweMilayisho kwiZithuthi.